Enam : “Foana ny kolikoly”, hoy ny tale jeneraly vaovao | NewsMada
Enam : “Foana ny kolikoly”, hoy ny tale jeneraly vaovao
Lanonana maro sosona nataon’ny mpianatra ao amin’ny Association des auditeurs cycle expertise de l’Enam (ACEE), ny zoma teo. Anisan’izany ny fambolen-kazo nataon’izy ireo, tany Ambohimanga, teo ambany fitarihan’ny filohan’ny fikambanana sy ny tale jeneralin’ny Enam vaovao. “Hazo 400 fototra ny nambolen’ny fikambanana, izay iaraha-miasa amin’ny mponina ny fanaraha-maso azy. Misy koa ny fanaraha-mason’ny mpikambana ety an-toerana ahitana ny fitombon’ny zana-kazo”, hoy ny filohan’ny ACEE, Rasoloson Hery Andriamanohisoa. Mpianatra manaraka fiofanana, ary efa mpiasam-panjakana avokoa ireto nanatanteraka fambolen-kazo ireto. “Sady famitana ny adidy amin’ny tanindrazana no firaisankina ihany koa”, hoy ihany ny filohan’ny fikambanana.
Nanararaotra kosa ny tale jeneralin’ny Enam vaovao, Rabetahina Pascal Pierrot, izay niara-namboly hazo tamin’ireo mpikambana ao amin’ny ACEE, fa laharam-pahamehana ho azy ny fanafoanana ny kolikoly. Raha vao maheno hoe Enam mantsy ny olona, mihevitra avy hatrany fa resaka kolikoly no manjaka ao. “Tsy mitombina izany, ary miara-miasa amin’ny Bianco izahay amin’ny fanatanterahana ny asa. Eo ihany koa fanatsarana ny fampitaovana ny mpianatra toy ny fametrahana ny Wifi, ny parking sns”, hoy ny tale jeneraly.
Nitohy tamin’ny lanonana niaraha nifaly ny an’ireto mpianatry ny Enam. Tsy vitan’izay anefa fa mbola nisy ny fifanakalozan-kevitra teo amin’izy ireo hanatsarana ny fikambanana sy ny fampandrosoana entiny.